Toerana filokana an-tserasera Bulgarian Online - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(534 vato, average: 4.00 avy tany 5)
Tranonkala casino an-tserasera mampiantrano mpilalao avy any Bulgaria
Zahao ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Bulgaria ary manolotra lalao an-tserasera avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao casino mivantana amin'ireo mpivarotra rindrambaiko malaza toa ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming ary maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mijery ny tranonkalan'ny tranokalan'ny aterineto amin'ny aterineto mba hijanonana amin'ny fametrahana ny fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny aterineto, ny bonus ary ny fomba fandoavam-bola ho an'ireo mpilalao avy any Bolgaria.
Mahasarika mpizahatany i Bulgaria fa tsy amoron-dranomasina fasika, fa miaraka amina fialamboly maro karazana. Faly tokoa ny mpizahatany sy ny mponina eo an-toerana, ara-dalàna ny filokana any Bulgaria. Mariho ho an'ireo mpitsidika ny lisitry ny filokana amin'ny Internet fa ny trano filokana lehibe indrindra ao amin'ny firenena dia ao an-drenivohitr'i Sofia, ary koa any amin'ireo faritra fialantsasatra malaza. Ny fahefana ara-dalàna mifehy ny filokana ao amin'ny firenena dia ny Vaomiera misahana ny filokana amin'ny fanjakana, natsangan'ny minisiteran'ny vola any Bulgaria. Antontan-taratasy ofisialy manome alalana ny filokana ao amin'ny firenena ny lalàna vaovao momba ny filokana ao Bulgaria, izay nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2017.
Lalao an-tserasera ao Boligaria
Ara-dalàna ny filokana an-tserasera any Bulgaria. Ireo mpandraharaha iraisam-pirenena dia mila mahazo fahazoan-dàlana hanatanteraka hetsika filokana amin'ny faritry ny firenena. Hatramin'ny volana Janoary 2017 dia misy tranokala filokana an-tserasera maro any Bulgaria - manomboka amin'ny casino an-tserasera ka hatramin'ny mpamaky boky amin'ny Internet. Ny marika malaza indrindra dia Pokerstars, bet365, bwin ary betfair.
Lisitry ny Top Sites amin'ny Top Sites amin'ny Bolongana 10
Bulgaria dia firenena iray manintona ireo mpizahatany miaraka amin'ny fialantsasatra mahafinaritra any amin'ny Ranomasina Mainty, toeram-pisakafoanana ski ary trano filokana. Ny fampifangaroana ny serivisy tena tsara sy ny vidin'ny demokratika dia mahatonga ity firenena ity ho lasa mpizahatany misandrahaka manerantany. Ny andraikitry ny CasinoToplists dia ny mahita hoe manao ahoana ny filokana sy ny filokana an-tserasera eto Bulgaria amin'izao fotoana izao.
Casino ao Bolgaria:
Gambling and laws from 1979 to 2017;
Ny trano filokana an-tserasera an'ny mpandraharaha iraisam-pirenena dia tokony hanana fahazoan-dàlana Bulgaria. Voasakana ny ambiny;
Raha tsy voasakana ny mpandraharaha iraisam-pirenena dia afaka milalao ianao. Saingy mety hitranga aminao izany (mety hosakanana);
Casinos terrestres no fitsipika ao amin'ny hotel 4-5 kintana, avy amin'ny pasipaoro 18 taona + +;
Te-hilalao kasino an-tserasera ve ianao? Holazainay aminao ny fomba hanaovana izany - torolàlana tsikelikely;
Bolgaria: jeografia sy tantara, toerana mahaliana ao Sofia, tranga mahavariana momba ny firenena sy ny mponina ao aminy.
Ny lalàn'i Bulgaria momba ny filokana - boky ara-tantara
taona Lalàna sy fanovana
1979 Fanokafana ny trano filokana voalohany ao amin'ny hotely Sofia "Vitosha"
1999 "Ny lalàn'i Khazart" dia lalàna mifehy ny filokana ao amin'ny firenena. Famoahana fahazoan-dàlana avy amin'ny vaomieram-panjakana misahana ny filokana. Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa vola eo an-toerana dia manan-jo hanokatra casino. Mba hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa vahiny dia mila mividy trano fandraisam-bahiny farafaharatsiny 4 *.
2000 Tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana avy amin'ny Kaomisionam-panjakana amin'ny filokana (SCG) ireo mpandraharaha amin'ny casino amin'ny aterineto.
Inona no dikan'ireo lalàna ireo ho an'ny mpilalao?
Amin'ny lafiny ofisialy, afa-tsy ireo casinos nahazo alalana tany Boligara.
Ny casino vahiny sasany dia voasakana noho ny adiresy IP ary na ireo izay manana fahazoan-dàlana ao amin'ny Vondrona Eoropeana (izay mifanohitra amin'ny fitsipiky ny Union Europe momba ny varotra malalaka).
Araka ny fitsipiky ny fanjakana, ny mpandraharaha dia tsy maintsy "ara-batana" ho eo amin'ny faritry ny firenena, manana sehatra hafa ary mandoa hetra manohana ny firenena.
Raha tsy voasakana ny tranokala ao amin'ny faritanin'i Bulgaria - dia azo alaina amin'ny lalao izany.
Kasino “offline” an-tanety any Bulgaria
Ny casemien terrestres dia misy any amin'ny hotely miaraka amin'ireo kintana 4-5 sy any amin'ny toerana fitsangatsanganana manokana
Ny casino dia takiana amin'ny fahazoan-dàlana avy any Bolgaria
Fepetra takiana amin'ny fidirana amin'ny casino any Bulgaria: taona 18 taona, fisian'ny antontan-taratasy famantarana. Tsy afaka hilalao ianao raha misotro toaka na mifoka zava-mahadomelina, tonga manao fanamiana ary mpiasam-panjakana na manana fifandraisana amin'ny asa filokana (na ny havan'ireo tompona casino sy mpiasa aza tsy mahazo milalao).
Kasino an-tserasera any Bulgaria - Ahoana no hanombohana filokana amin'ny Internet?
Nanapa-kevitra ny hamorona torolàlana isan-tsokajiny momba ny fomba hanombohana hilalao amin'ny casino an-tserasera izahay. Toy ny fitsipika, ny casino vahiny rehetra dia mampiasa anglisy iraisam-pirenena, ka farafaharatsiny farafaharatsiny fahalalana ilainao.
Hamarino raha ara-dalàna io banky io ao amin'ny faritanin'i Bolgaria. Raha tsy voasakana ao amin'ny faritanin'i Bulgaria ny adiresy IP, dia azo ampiasaina izy io. Indraindray ny kasino dia tsy manaiky mpilalao avy any Bulgaria, tsara kokoa ny mianatra momba azy io amin'ny casino manokana amin'ny serivisy fanampiana. Ny serivisy toy izany dia ao amin'ny casino an-tserasera mendrika rehetra.
Jereo ny casino amin'ny fahamendrehana. Noho izany dia mendrika ny mahazo antoka ny:
Ny fisian'ny fahazoan-dàlana iraisam-pirenena ho an'ny casino (misy fampahalalana hita ao amin'ny tranonkalan'ny kasino amin'ny sehatra ho an'ny daholobe);
Ny fanandramana ny casino mandritra ny taona 3 taona farafahakeliny;
Fanamarihana tsara avy amin'ireo mpilalao ao amin'ny tambajotra;
Ny rindrambaiko amin'ny casino dia natolotry ny mpamorona lehibe amin'ny lalao an-tserasera (NetEnt, Playtech, Microgaming, sns).
Mangataha fomba fandoavam-bola - manolotra safidy safidy fandoavam-bola marobe (ny VISA, PAYPAL, WebMoney, Skrill, Yandex na ny hafa) ny casino ary zonao ny misafidy izay mety aminao. Ho fanampin'izay, farito ny lalàna mifehy ny fidirana sy fisintonana vola (indraindray ny tambin-karama lehibe dia arotsaka amin'ny ampahany sy mandritra ny fotoana iray). Aza adino ny fiovam-bola sy ny komisionan'ny mpandraharaha hisintona vola.
Fantaro ny fepetran'ny asa ao amin'ny casino:
Bonus teny (fampiantranoana) sy fandaharanasa fidian'ny mpanjifa
Fepetran'ny kaonty fanokafana (ny trano filokana sasany dia mitaky porofo mombamomba azy - marina.
Vakio tsara ny fepetran'ny casino:
fepetra ny bonus sy ny mpilalao,
ny fepetra fisoratana anarana (indraindray ny fanandramana ny pasipaoro dia ilaina hanamarinana ny kaonty);
na mila maka ilay rindrambaiko ianao ary mametraka izany ao amin'ny ordinateranao na afaka milalao ao amin'ny navigateur
ireo fepetra takian'ny toetra ara-teknika (ho an'ny mpilalao mivantana amin'ny aterineto)
Karazana fiarovana inona no omen'ny casino? Fampandrenesana angona SSL, programa momba ny lalao tompon'andraikitra, sns.
Safidy sy safidy manokana
Manome lalao izay mahaliana anao ve ity casino an-tserasera ity?
Tianao ny famolavolana casino? Moa ve intuitive ny zava-drehetra?
Aorian'ny fahafantaranao ireo teboka rehetra etsy ambony dia afaka miditra amin'ilay lalao ianao. CasinoTopLists dia manoro hevitra anao koa hamaky vaovao momba ny fitsipiky ny lalao, ny rafitra ary ny paikady. Noho izany dia afaka mianatra haingana amin'ny lalao ianao, ary ho voafehy tsara ny banky.
Toerana eto Boligaria ary tantara ara-tantara fohy
Ny firenena dia miorina eo amoron'ny Ranomasina Mainty ary mifanila amin'ireo firenena toa an'i Gresy, Torkia, Serbia, Romania ary Makedonia. Sambany momba ny Bolgara no voalaza ao amin'ny 354 taona. Hatramin'io fotoana io, ny tantaran'ity firenena ity dia niatrika zava-nitranga maro: ny fandresen'ny Empira Ottoman tamin'ny faran'ny taonjato faha-14, ny fandraisana anjara tamin'ny ady tamin'i Serbia nandritra ny Ady lehibe voalohany, ary ny fandraisana anjara tamin'ny Ady Lehibe Faharoa teo anilan'ny Alemana. Bulgaria maoderina dia niforona tamin'ny 1989 ary lasa repoblika parlemantera. Mizara faritra 28 izao ny firenena miaraka amin'ny renivohitra ao an-tanànan'i Sofia.
Bolgaria eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
Fahitana an'i Sofia
Alexander Cathedral Nevsky . Adiresy: Aleksandar Nevski 1 1000. Naorina tamin'ny 1912 izy io ary miavaka amin'ireo fiangonana sy monasitera hafa miaraka amin'ny halehibeazany. Fahaizana - olona 5,000 XNUMX.
National History Museum . Adiresy: Vitoshko Lale Street 16, 1618. Eto no nakana ireo zava-kanto ara-tantara tamin'ny andro fahagola ka mandraka ankehitriny.
National Picture Gallery . Adiresy: пл. "Prince Alexandre I" №1. Ny mpitia zavakanto dia liana amin'ny fitsidihana fampirantiana hosodoko 50,000 XNUMX avy amin'ny tompo malaza eran'izao tontolo izao. Ireto koa misy fampirantiana sokajy maoderina sy kilasy maoderina.
Zoo . Adiresy: Ny fidirana afovoany dia hita ao amin'ny lalamben'i Simeonovsko Shosse. “Fidirana Andrefana avy amin'ny arabe Srebarna 1. Amin'ny faritry 250 hektara dia hahita biby sy vorona hafakely ianao fa tsy tena biby sy vorona.
St. Sophia Cathedral . Adiresy: làlana Paris 2. Ity no Katedraly, natsangana tamin'ny taonjato faha-6, nanome ny anarana hoe renivohitr'i Bulgaria.
Zavatra mahaliana momba an'i Bolgaria sy Bolgara
Sofia no tanàna tranainy indrindra manerana an'i Eoropa;
Bolgaria no firenena slavy voalohany, izay noraisin'ny 865 ny Kristianisma;
Ny alfabeta ao Bolgaria dia Cyrillic, tena mitovy amin'ny Rosiana, ny litera E, E ary ny N dia tsy ao anatiny, saingy misy ny b b, ary tsy famantarana marika izany;
80-85% ny divay eran-tany dia aondrana any Bulgaria;
Ny mponina ao an-toerana dia miakatra hatramin'ny 40% ho haba;
Mofomamy ankafizina - banichka na banitza (fanaovan-mofo miaraka amin'ny famenoana hafa manomboka amin'ny brynza ka hatramin'ny epinara) .Tsy misy ny fromazy ohatra;
Kiselo mlyako - kefir nasionaly - tsy misy analogue eto amin'izao tontolo izao, satria novokarina niaraka tamin'ny karazana bakteria manokana. Any Japon dia be fangatahana izy ary heverina ho "elixir of longevity";
Ny olona Bulgarianana dia tsy maharaka ara-potoana indrindra ary tara no avela. Ho fanampin'izany, ity olona ity dia miavaka amin'ny toetra tsy mahafinaritra toy ny fialonana. Ny mpiara-monina dia tena tia mifampiresaka;
Bagpipe dia fitaovana nasionaly;
Any amin'ny tanàna fialan-tsasatra dia matetika misy menio ho an'ny eo an-toerana sy ny vahiny. Mazava ho azy, ny fahasamihafana amin'ny vidiny dia azo tsapain-tanana;
Ny hoe "Eny" mandohalika any Russia dia midika hoe "tsia" any Bulgaria, ary ny mifamadika amin'izany. Mitandrema!
Momba ny casinos Boligara
Ny ankamaroan'ny fitsaharako dia tao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Bansko. Ankoatry ny habeny maotina, dia manamarika ihany koa ny vidiny antonony, ny natiora mahafinaritra ary ny fahatsapana tsy fahazoana aina kely foana. Mahatratra soatoavina mampatahotra ny isan'ireo mpizahatany; ny balloon dia nivonto nandritra ny fotoana ela tamin'ny rivotra, ary tonga haingana tany amin'ny fanjakana nialoha ny fikapohana mafy, manimba ary tampoka izy. Vahoaka mpizahatany avy amin'ny firenena samy hafa eropeana, ampiarahina amin'ny fahazarana hafahafa an'ny mponina - hanantona ny sarin'ny havana maty eo am-baravaran'ny tranony. Na izany aza, ny olona avy any Bansko dia manana hatsaram-panahy sy hatsaram-panahy ihany koa izay, amin'ny ankapobeny, dia mihoatra ny atmosfera photonecropolis. Ho fanampin'izany, tiako be ny amin'ny sakafo fisakafoanana iray ao an-toerana miaraka amin'ny nahandro nasionaly, taorian'ny fahombiazan'ny fihinanana hena hena lehibe, noentina naka kaonty aho ary nofantsihana teo amin'ny fitoeran'entana manokana miaraka amin'ny fiatraikany antsy maranitra. Na dia hanao toy izany aza amin'ny vola dia tsy nomena.
Ny momba ny casino ankehitriny. Any Bansko dia ory izy ireo. Ho an'ireo famantarana mamirapiratra dia miafina ny efitrano malalaky ny setroka misy milina fantsom-pifandraisana. Ankoatr'izay, na ny safidin'ireo slot mitovy aminy aza dia mbola maniry mafy. Tadidiko ny toerana roa, ny iray tao amin'ny hotely Vihren, ary ny iray antsoina hoe Blitz. Raha ny tokony ho izy, amin'ireo trano filokana rehetra ao Bansko dia noheveriny ho mendrika indrindra izy, avy amin'ny hafa dia niavaka tamin'ny mpiasa mahafinaritra sy ny fisian'ny rôleta elektronika izany. Ny mpitantana eo an-toerana dia mahay tsara amin'ny teny rosianina. Nilaza izy fa any Bulgaria dia tsy misy trano filokana mahazatra fotsiny any Sofia sy Varna.
Eny, mbola tsy tonga tany Varna aho, fa efa tonga tany Sofia. Tany Plovdiv aho tamin'ny voalohany. Raharaha lehibe, asa ary toe-javatra hafa. Saingy nanam-bintana aho nanana andro malalaka. Nijanona ihany izany raha hanapa-kevitra ny fomba hahatongavana any amin'ny renivohitra Bulgaria. Handeha hisotro aho, noho izany dia nifaninana ny handray fiara manofa, ny dia tamin'ny bus koa dia toa fahafinaretana mampiahiahy. Saingy nisy zaza Okrainiana nantsoina hoe Taras tonga namonjy ahy. 10 taona no nipetrahany tany Bulgaria ary raha lazaina, dia manao bizina eto. Nampahafantatra ahy an'i Volodya, izay avy amin'ny Saratov mafana, i Taras. Tany amin'ity firenena atsimo ity dia nahita trano faharoa ilay zazalahy. Amin'ny ankapobeny dia nanaiky izy fa haka ahy amin'ny vola mampihomehy. Teny an-dalana dia nanaiky i Volodya fa mbola tsy nankany Sofia na trano filokana mihitsy izy, ary noho izany dia mahaliana azy toa ahy io dia io.
Tonga tao an-drenivohitra Bulgaria izahay, nisy fotoana kely, fa te hanana fotoana hanaovana izany aho. Ho fitsinjovana ny fahamendrehana, nahita maso toerana fizahan-tany manan-danja maromaro aho, izay holazaiko amin'ny antsipiriany amin'ny lahatsoratra hafa, ary ny hariva dia nankeny amin'ny casino. Nahavita nitsidika toerana telo aho: Princesses, Viva ary London.
Ny Princess Casino dia ao amin'ny Rodina Hotel no misy. Izy io dia andrim-panjakana mendrika tokoa: karazana roulette, poker ary blackjack mahazatra - latabatra 9 ihany. Ny dolara dia azo atao amin'ny dolara, euro ary leva eo an-toerana. Avela hividy mivantana eo ambony latabatra ny chips. Tsy ratsy ilay Andriambavy, saingy efa ho lany ny fotoana, ary te hahita bebe kokoa aho.
Ny fitsidihana faharoa dia ny casino Viva. Ao anatin'izany, ny mpivarotra rehetra dia zazavavy mitafy akanjo maitso tsara tarehy. Ny ampahany manokana amin'ny akanjo dia ny decollete lalina, izay, na dia somary manelingelina ny lalao aza izy ireo, saingy manome fahafinaretana kanto. Ao amin'ity casino ity no be olona indrindra, ampy ho an'ny eo an-toerana sy ny vahiny. Nahavita nitady toerana teo amin'ny latabatra blackjack mora vidy izahay sy Volodya - sahirana ny ambiny. Ka tsy maintsy nilalao tamin'ny tsatok'ireo ankizy aho. Nisy lehilahy nipetraka teo akaikinay, tamin'ny voalohany dia nentiko tany amin'ny vehivavy ludomanina Bulgarian may izy io. Nandritra ny fotoana rehetra nitohy ny lalao dia namoaka fanehoan-kevitra mampihetsi-po tamin'ny tenin-drazany izy. Ny ampahany lehibe amin'ny teniny dia tsy azoko, rehefa avy nanazava i Volodya - tsy vehivavy mandehandeha izy io, fa ny rain'ny tovovavy croupier manao akanjo maitso misy vozona. Ny ankamaroany dia niangavy ny zanany vavy izy mba hiverina any amin'ny oniversite ary, ho an'ny vokany lehibe kokoa, dia niantso azy hoe mpivaro-tena izy.
Tamin'ny fotoana nandehanan'ny tanan'ny famantaranandro taorian'ny misasakalina dia efa nifindra tany amin'ny andrim-panjakana manaraka izahay sy Volodya. Nantsoina hoe London ilay casino, niarahaba antsika tamin'ny tànana mivelatra izy ary namela ny fahatsapana nahafinaritra indrindra. Any London dia misy poker club. Tazonina eto foana ny fitsangantsanganana, ary ampitaina amin'ny plasma ao amin'ny efitrano mahazatra izy ireo. Ho fanampin'ny efijery fahitalavitra mihantona amin'ny rindrina, manana latabatra 13 ihany koa izy ary misy roa hafa hita ao amin'ny faritra poker club. Ao amin'ity casino ity dia misy efitrano VIP ihany koa, saingy tsy ny rehetra no ekena ao. Etsy andanin'izany, tsara ny mpiasa ao Londres, saingy vao maika nihatsara, tsy miteny Rosiana, fa amin'ny Anglisy na amin'ny teny vahiny hafa. Ny fahalalana ny fiteny dia tsy manamora ny fahazoana ny fahalalana fotsiny ihany, fa mampitombo ny haavon'ny serivisy amin'ny ankapobeny.
Any Sofia, misy kasino hafa, fa ny ankamaroan'izy ireo dia efitrano misy milina fametahana misy marika mamirapiratra mamitaka. Mazava fa tsy filokana any Bulgaria no lovia lehibe, miatrika vesatry ny fitsaharana nentim-paharazana kokoa izy ireo, tsy misy olona tonga eto manokana ho an'ny filokana eo an-toerana, tsy Vegas ho anao. Ary misy ny tsy fahampiana eo amin'ny sehatry ny indostria, mazava ho azy, saingy ny fahatsapako ankapobeny dia tena tsara. Ho fanampin'izay, namarana ny dia tany amin'ny trano filokana telo aho, na dia tsy lehibe aza, fa ny vidin'ny làlana sy ny fialamboly kosa dia voaloa tanteraka. Noho izany, raha mahita ny tenanao any Bulgaria ianao ary te hilalao - afaka mandeha soa aman-tsara any amin'ny casino eo an-toerana ianao, aza mahita ireo famantarana miloko marevaka.
0.1 Gambling in Bulgaria
0.2 Lalao an-tserasera ao Boligaria
0.3 Lisitry ny Top Sites amin'ny Top Sites amin'ny Bolongana 10
3 Gambling in Bulgaria
3.0.1 Ny lalàn'i Bulgaria momba ny filokana - boky ara-tantara
3.0.2 Inona no dikan'ireo lalàna ireo ho an'ny mpilalao?
3.0.3 Kasino “offline” an-tanety any Bulgaria
3.1 Kasino an-tserasera any Bulgaria - Ahoana no hanombohana filokana amin'ny Internet?
3.1.1 Toerana eto Boligaria ary tantara ara-tantara fohy
3.1.2 Bolgaria eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
3.1.3 Fahitana an'i Sofia
3.1.4 Zavatra mahaliana momba an'i Bolgaria sy Bolgara
3.2 Momba ny casinos Boligara
uptown aces tsy misy tahiry